OGAALKA SOOMAALI-WEYN…Qallinka:C/naasir Guray Meecaad |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN…Qallinka:C/naasir Guray Meecaad
Bilowgii qarnigii lixaad, xilliga maamulkii Faransiiska uu ku howlanaa mashruuca dekadda Jabuuti iyo dhismaha waddada tariinka, aragtida Soomaali wayn waxaa ololkeeda ay ka hureysey SOOMAALIYA iyo SOMAILAND. Waxay caga-dhigatay labada goboL ee hadda lagu magacaabo Sool iyo Nugaal. Waxaa halkaas degey halgankii hanaqaadka noqdey ee uu horseedaha ka ahaa Sayid Maxamad Cabdulle Xasan. Dhaqdhaqaaqaasi wuxuu ahaa mid quudinayay aragtida ku dhisan in gumeysiga lala dagaalamo oo loo diido in uu si buuxda uga taliyo ciidda Soomaaliyeed. Dareenka uu xambaarsanaa dhaqdhaqaaqu wuxuu ahaa in fikraddaas la wada gaarsiiyo gobollada ay Soomaalidu degaan dhamaantood.
Nuskii danbe, 20-kii sano oo ay halgamayeen, Daraawiishtu waxay ahayd dowlad leh barlamaan iyo xeer. Waxay isu arkayeen in ay masuul ka yihiin ciidda Soomaalida. Markasta oo ay dhambaallo is-dhaafsadaan xoogagga mustacmarka ah, Sayidku wuxuu u muuqdey nin u hadlayay dhamaan beelaha Soomaaliyeed. Suugaantii badneyd oo Sayidku uu waxaa laga fahmayaa sida uu u doonayay in aragtidiisa uu xoog ku gaarsiiyo beelaha Soomaaliyeed. Tixahan aanu tusaalaha u soo qaadaneyno waxay markhaati ka yihiin siduu u doonayay in Soomaaliya uu gacanta ugu dhigo.
Haddii aanan Majeerteen sidii ari u iideynin
Ararsamiyo Iidoor haddaan iranka loo qaadin
Oo aanan irbaha dheer ka jarin eyda reer Hagara
Awlaxa haddii aan la dhicin niman Ogaadeen ah
Kii ooraah xumaan jiray haddaan aabe kaga yeedhin
Ololaha colkaan wado haddaan laga ashaantoobin
Jidka adari loo maro haddaan laga ugaadhoobin
Meeshan iyo Iimey haddaan weerar ku ekeynin
Ilka-dheere iyo Luuq haddaan laga awaareynin
Ajiga waamo joogaa haddaan ololku soo g aadhin
Adduunyada haddii aan ka shadin tan iyo Aw-dhiigle
Nin adduunyo foofsada haddaan uunka laga waayin
Bulla-xaar agteediyo haddaan Awdal loo yaacin
Ooryaha Amxaarada haddaanay Cadan ka awleynin
Ingiriiska eyga ah haddaan baqa ku aynfaadin
Goortaan awaawiyo hadduusan oogsan oo cararin
Agabtiyo haddii aanu qubin aaladdiyo seefta
Haddii aan islaaxii Ber-bera lagu abaaroobin
Oo aanan albaabada qufulin ila-xidhkii daarta
Oo ayan eber noqon kobtii la istareexaayey
Igarriyo haddii aan rag kale aakhiro u hoyanin
Oo aanan sidii aar libaax wax u unuun goynin
Soomaali oo idil haddaan laga imiil qaadan
Ab uu yahayba aadmigu haddaan eeratuu diririn
Oo aanan u aar-gudin raggii naga af-dhowraayey
Alleylehe islaam baan ihiyo umulku waa beene.
Dagaalladii cuslaa ee Sayid Maxamad uu waalidka ka ahaa, intooda badan waxay ka dhaceen gobollada somaliland, kuwaas oo Ingiriisku uu xilligaas qeybna degey qeybna ku sii socdey. Waxaa xusid mudan laba meelood ayaa joogitaanka shisheeyaha uu ku xoogganaa. Waxay ahaayeen Xamar iyo Ber-bera. Gobollada bariga iyo bartamaha, Talyaanigu weli ma uusan caga-dhigan oo laba saldanadood ayaa Soomaalida uga dhisnaa. Degmada Baargaal iyo degmada Hobyo oo labaduba ay ku sii jeedaan bad-waynta Hindiya ayaa u kala ahaa magaalo-madax.
Dabayaaqadii qarnigii XIX-aad, labadaas maamul iyo Talyaanigii waxay dhigteen heshiis maxmiyadeed. Laakiin waxay u madax-bannaanaayeen hannaankooda is-maamul ee gudaha, xidhiidhadooda ganacsi iyo dhismaha ciidamadooda. Labadaas maamul, inkasta oo goor danbe ay colloobeen dhaqdhaqaaqii Daraawiishta, misana colaadda dhex-martey waa ay koobneyd. Sababtu waxay ahayd, waa marka koowaade, sanooyinkaas hore labada maamul waxay soo dhoweeyeen qadiyaddii ay Daraawiishtu u joogsatey. Sanooyinkii danbe oo ay colloobeen, hoggaanka Daraawiishtu wuxuu ogaa labada saldano in ay u dhisnaayeen ciidamo xooggan oo iska caabiyi kara weerarkooda. Islamarkaas ma jirin maamullo reer Yurub ah oo si toos ah faraha ugula jiray noloshii dadkii ku dhaqnaa degaamada ay ka talinayeen labada saldano. Tusaale-dhig wanaagsan waxaa ah, Daraawiishta, iyaga oo Taleex fadhiya ayay u suuroobi weydey in ay dhanka bari ay Dhuudo dhaafaan. Halka dhanka koonfureed ay si sahlan ku gaareen Beled-wayne.
Marka ay xaaladda Soomaalidu sidaas ahayd, dadku kuma ayan baraarugsanayn mashaariicda gumeynta iyo dhaxal-wareejinta ah ee la soo derestey noloshoodii. Sababtu waxay ahayd wacyiga dad-waynaha oo ahaa mid hooseeya. Beelaha Soomaaliyeed intooda badan reer miyi ayay ahaayeen. Maslaxad ay ilaashadaan oo dhaafsiisan dhulka ay xooluhu u daaqaan, ma ayan garanayn. Meelaha la oran karo wacyi ayaa yiil, islamarkaana illaa xad madax-bannaani ayay heysteen waxay ahayeen gobolladii ku guuleystey in ay taladooda ururiyaan. Waa saldanadihii ay ka talinayeen Boqor Cismaan Maxamuud, Suldaan Yuusuf Cali iyo Suldaan Maxamuud Cali Shire. Iyaga qudhoodu ka anfariireen Sayidka markii uu diley Garaad Cali (Garaadkii beelaha Dhulbahante). Islamarkaas waxaa jiray cadaadis kaga yimid dowladihii gumeysatada ahaa oo uga digey in ay ku dhowaadaan dhaqdhaqaaqa.
Sidaas si lamid ah ayaa qadiyaddii Soomaali-wayn ayan soo dhoweyn uga helin xoogaggii adduunka ee mustacmarka ahaa. Goor hore iyo goor danbe, iyagu waxay qadiyaddan u arkayeen arin khatar ku ah masaalixda ay ka leeyihiin degaankan istraateejiga ah. Daraawiishtii waxay markaas ku dhacdey xaalad lamid ah middii ay Soomaalidu ka maah-maahdey ee ahayd: Xaalad rag soo marta waxaa ugu xun goor midka aad u hiilineysidna uu ku garan waayo, kaad ka hiilineysidna uu ku garto.
Ingiriisku wuxuu ahaa dowlad fil wayn oo xoog leh. Xilligaas waxay safka hore ka taagneyd dowladaha danaha ka yeeshey degaanka. Sidaa darteed gulufyadii weerarka Daraawiishta, xooggoodii waxay qabsadeen maamulkii uu Ingiriisku lahaa iyo degaankii uu ka dhisey. Inkasta oo 100 goobood ay ka badnaayeen isku-dhicii ciidameed ee labada dhinac, misana kuwa magacyadooda ay dibad-baxeen waxaa kamid ah Beer-dhiga (1901), Af-bakayle (1901), Faradhiddin (1901), Cagaar-wayne (1903), Dharatoole (1903), Jidbaale (1904), iyo Dul-madoobe (1913). Dagaalladaasi ayaa intoodii badneyd ay guushii Daraawiishtu raacdey.
Sanadkii 1918-kii waxaa dhamaadey dagaal waynihii I-aad ee dunida. Dowladdii Ingiriiska waxaa soo waajahay walaac ay ka qaadey fowdadii adduunka ka dhacdey in ay sabab u noqoto in gacanteeda ay ka baxaan degaanadii ay gacanta ku heysey. Wasiirkii mustacmaraadka Lord Alfred Millner, oo ahaa ninka wal-walkaas xooggiisu uu ku dhacayay ayaa wuxuu arkayey, Soomaalidu in ay kamid tahay gobollada culeyska ku qabanaya dowladdiisa. Waxaa u muuqatey in uu Soomaalida u soo diro ciidan xooggan oo soo af-jara dhibta ay Daraawiishtu ku heysey maamulka maxmiyadda ee British Somaliland. Lord Milner wuxuu ogaa in afar jeer ay dowladdiisu horey u qorsheysey weerar baaxad wayn oo ay ku soo af-jarto dhaqdhaqaaqa Daraawiishta. Laakiin ay si fool-xun ugu fashilmeen.
Lord Alfred Millner, Wuxuu qorshihiisa kala tashadey abaanduulihii ciidanka boqortooyada ee Ingiriiska Sir Henry Hughes Wilson. Sarkaalkan oo darajadiisu ay ahayd jeneraal ayaa wuxuu wasiirka u sheegey in arintaasi ay tahay mid u baahan kharaj aad u badan. Wuxuu xusey ugu yaraan laba qeybood oo ciidan ah in weerarka ceynkan ah uu u baahan yahay. Lacag malaayiin dhan ahna waxay ku baxayaan qalabkooda, gaadiideyntooda iyo dagaal-gelintooda. Hal qeyb oo ciidan ah tiradiisu wuxuu u dhexeeyaa 1000 – 15000 oo nin. Xoogga intaas le’eg ururintiisa iyo sahaydiisa, Ingiriiska inkasta oo uu awoodey, misana maahayn arin u sahlaneyd xilligaas. Gaar ahaan iyada oo uu ka soo baxay dagaal-waynihii I-aad ee dunida. (Anne Baker, From Biplan to Spitfire, pp. 161 – 162. 2003, London – UK).
Xoghayihii mustacmaraadka Lord Milner wuxuu markaas u yeertey sarkaalkii taliyaha ka ahaa ciidanka dhowaan la sameeyey ee ah ciidanka cirka. Taliyahaasi wuxuu ahaa General Hugh Trenchard. Xoghayuhu wuxuu sarkaalka ka codsadey in uu kala taliyo sidii uu ka yeeli lahaa colaadda kaga furan geeska Afrika. General Trenchard, wuxuu ahaa nin u arkayay ciidanka cirka in ay yihiin kuwo si gaar ah u fulinaya howlaha ay qabanayaan. Sidaa darteed wuxuu markiiba ku taliyay in howsha oo dhan loo xil-saaro ciidamada cirka ee boqortooyada. Xoghayihii mustacmaraadka ayaa markaas wuxuu soo jeediyay aragti ah in aanan laga maarmeyn cuntubyo kamid ah ciidanka dhulka. General Trenchard ayaa wuxuu ugu jawaabay, ciidanka mustacmaradda ee ku sugan degaanka in ay ku filan yihiin wixii howl ah oo dhulka laga qabanayo. (A Brief History of the Royal Air Force, HMSO. P. 63, C.J. Finn, 2004. London – UK).
Dabadeed waxaa la abaabuley kulan looga wada-hadlayay weerarka uu Ingiriisku soo qaadayo. Ragga goob-joogayaasha ka ahaa fadhigaas, waxaa kamid ahaa Winston Churchill oo isagu markaas ahaa xoghayaha dowladda ee dagaalka iyo dayuuradaha. Waxaa kale oo joogay fadhiga Leo Amery xoghaynta dowladda arimaha mustacmaraadka. Lord Alfred Milner, Sir Henry Wilson iyo General Hugh Trenchard.
Henry Wilson oo isagu ahaa abaanduulaha ciidamada Ingiriiska, si xooggan ayuu uga soo horjeedey in mashruuca dagaalka ay hoggaamiyaan xafiiska mustacmaraadka iyo ciidanka cirka. Laakiin Leo Amery. Iyo General Hugh Trenchard waxay ku adkeysteen in ayan ciidan sinaba u dalban oo aan ka ahayn ciidanka cirka. Ugu danbeyntii, abaanduulihii waa uu qancay. Sidaas ayaa qorshihii weerarka waxaa kula wareegey ciidankii cirka ee Ingiriiska. (Anne Baker, From Biplan to Spitfire, pp. 161 – 162. 2003, London – UK).
In Ingiriiska hubkii ugu danbeeyey uguna qalafsanaa uu u adeegsado dadkaas reer miyiga ah oo xaqooda difaacaya, waxay tilmaameysaa sida ay uga go’neyd in uu soo af-jaro colaadda. Sida muuqata wuxuu markaas ka leexdey qaabkii uu u dhigi jiray qorshayaashii hore ee dagaalka. Muuddadii 20-ka sano ahayd oo dagaalkaasi socdey waxaa Ingiriiska ka soo gaadhay khasaaro baaxad wayn oo naf iyo maal leh. Waxaa kaga darneyd sumcad xumida magaciisa ay gaadhsiinayeen wiilashii Soomaaliyeed ee geel-jirta ahaa. Qorshahan cusub wuxuu ahaa in uu xoogga saaro weerarka dhanka cirka ah. Waxaa xusid mudan, ciidanka cirka ee Ingiriiska (RAF – Royal Air Force) in uu xilligaas dhisan yahay muddo ah hal sano oo keliya. Ciidankaas ayaa waxaa la asaasey sanadkii 1918-kii. Xilliga la dejinayo qorshaha weerarkan waxay ahayd bartamihii sanadkii 1919-kii.
Saraakiishii Ingiriiska ee qorshaha dagaalkan dhigey waxay tilmaameen faa’iidooyinka uu leeyahay weerarka xagga cirka ah oo lagu qaadayo xarumaha Daraawiishta. Iyagu waxay qodobeeyeen dhibcaha uu kaga duwanaan doono dagaaladii ay horey ula galeen dhaqdhaqaaqii Daraawiishta. Waxay ku xuseen sidan:
Kharajka ku baxaya dagaalkan oo aad u yar
Khasaaraha uu dagaalkan geysanayo oo aad u kooban
How-galka weerarkan oo ah mid si deg-deg badan u fuleysa
Ciidanka loo baahan yahay in ay ka qayb-qaataan waa tiro aanan ka badneyn 250 nin.
Muddo lix bilood ah oo ku beegan nuskii danbe sanadkii 1919-kii ayay socotay howsha diyaargarowga. Bartamihii sanadkii 1919-kii, waxaa Cadan lagu ururshey qalab xoogan oo isugu jira matooro dayuuradeed iyo wixii agab ahaa oo kale oo laga dhisi lahaa dayuuradaha. Waxaa kale oo halkaas lagu keydiyay rasaas, bansiin iyo bambooyin qaraxyo mug wayn oo lagula diriro Daraawiishta. Agabkaas ayaa dhamaantiis wuxuu ka soo degey dekadda Ber-bera. Si looga qariyo indha Soomaalida, waxaa loogu sheekeeyey in waxaan degaya ay yihiin qalab shirkadeed oo lagu baarayo batrool. Howshaas waxaa masuul ka ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka circa, kaas oo la yiraahdo Cap. R. Gordon.
Bishii November 1919-kii ayuu Cap. Gorden wuxuu ka soo degey magaalada Ber-bera. Waxaa la socdey injineerkii u cayimi lahaa dhulka garoonka noqonaya iyo saraakiishii howl-wadeenada ahaa. Wax calaamad ah in ay ciidan yihiin ama ay duuliyayaal yihiin kama ayan muuqan. Meel 140 km. u jirta Ber-bera ayay ka bilaabeen laba howlood. Mid waxay ahayd ceel qodid oo ay indhaha dadka isaga duwayaan. Midda kale waxay ahayd dhul-sallixid oo ah halkii ay dayuuraduhu ka duuli lahaayeen. Ayaamo kadib, howl middaas lamid ah ayay Burco dibaddeeda ka bilaabeen. Bartamihii bishii disember, waxaa Ber-bera ka baxay oo dhanka burco ku dhaqaaqey 2.000 oo rati, kuwaas oo sidey wixii sahay ahaa oo lagu dagaalami lahaa. Lix cisho ayuu socdaalkii qaatay. Dabadeed waxay gaadheen degaankii Burco. (An article for The Anglo-Somali War 1901-1920. Dansk Militærhistorisk Selskab – Chakoten, Major B. Axel, april 1982, Copenhagen – Denmark).
30/ 12- 1919-kii, waxaa Ber-bera soo gaadhay markabkii sidey dayuuradaha. Isla maalintaas, qunsulkii Ingiriiska u fadhiyay Ber-bera F. G. Archer, mid dayuuradihii kamid ah ayuu wuxuu u direy xarumihii Daraawiishta iyo degaamo kamid ah meelihii ay dadku ku badnaayeen. Ujeeddadu waxay ahayd in ay ku soo daadiso waraaqo digniin ah oo qunsulku ku saxiixan yahay. Wuxuu ku qorey in uu cafis u fidinayo qof kasta oo Daraawiishta raacsan oo isa-soo dhiiba. Waxaa kaloo ku qornaa abaal marino kala duwam oo la siinayo qofkii soo qabta dad Sayidka uu ugu horeeyo iyo kuwo kamid ah dag-joogayaashiisii iyo duriyaddiisii.
20/ 1- 1920-kii ayaa xaruntii Daraawiishta lagu bilaabay weerarkii xagga cirka ahaa. Taasina waxay maalin ka danbeysey markii la diyaariyay ciidankii dhulka ka weerartami lahaa. Inkasta oo bambadii ugu horeysey lala beegsadey aqalkii uu degganaa Sayidka, misana waxba kuma uusan noqon oo waa uu ka baxsadey. Afar cisho ayay dayuuradihii ku noq-noqonayeen degaanka, iyaga oo bambeynayay wax kasta oo nool oo dhulka uga muuqda. Ka-sokow dadkii ku le’dey bambooyinka, waxaa goobihii la weeraray ku baaba’ay bahaahim u badan geel fardo iyo adhi. Dabadeed waxaa degaankii galay ciidankii tirada yaraa oo horey loo diyaariyay. Iyagu waxay ahaayeen ciidankii la oran jiray Somaliland Camel Corps. (An article for The Anglo-Somali War 1901-1920. Dansk Militærhistorisk Selskab – Chakoten, Major B. Axel, april 1982, Copenhagen – Denmark).
Weerarkaasi wuxuu soo af-jaray dhaqdhaqaaqii Daraawiishta iyo hankii ummadeed oo ay horseedaha u noqdeen. Dagaalkii dabadeed, Ingiriisku wuxuu ku xasiley gobolladii waqooyi iyo qeyb Ogaadeenya kamid ah oo uu gacanta ku hayay, uuse u ballan-qaadey boqorkii Itoobiya. Gobollada waqooyi wuxuu markaas u qeybiyay laba maamul. Degaamada xeebaha xiga oo uu ka yeeley meel maamul maxmiyadeed uu ka jiro. Wuxuu halkaas ka dhisey nadaam madani ah oo maxkamadihiisii leh. Degaamadii saldhigga u ahaa dhaqdhaqaaqii Daraawiishta, wuxuu ka dhigey meel uu ka jiro maamul ciidameed (military adminstration). Taasina macnaheedu wuxuu yahay qalab kasta ee degaanadaas yiil iyo hannaan-nololeed walba ee ka dhisan wuxuu si toos ah u hoos imanaysay xarumaha looga adeego ciidanka. Sababtu waxay ahayd in la cadaadiyo beelihii Soomaaliyeed ee sida xooggan u taageersanaa dhaqdhaqaaqii Daraawiishta.
Gobollada Soomaaliyeed ee Ingiriisku gumeysanayay waxay xilligaas kaga duwanaayeen kuwa kale, iyada oo xilligaas ay ka jirtay saboolnimo iyo dhaqaale xumi. Inkasta oo colaadihii xoogganaa oo muddada 20-ka sano ah ka socday gobolladaas ay raad ku lahaayeen saboolnimada halkaas tiil, misana sababo kale oo la xusi karo ayaa jiray. Marka gobolka la bar-bar dhigo gobollada kale, waxaanu heleynaa Jabuuti oo ay ku dhaqnaayeen Soomaali iyo Cafar, ayaa dadkaasi ay ka tira yaaraayeen kuwa ku dhaqan gobollada waqooyi. Islamarkaas, mashruucii dhismaha dekadda iyo waddada tariinka, waxay noloshoodii ku soo kordhisey ilo dhaqaale. Gobollada koonfureed, ayaa iyaguna Talyaanigu wuxuu geliyay maal-gelin xooggan. Mashaariic beero ah oo waa-wayn ayuu ka abuuray dhulka ay webiyadu maraan. Sidoo kale, laba mashruuc oo xooggan ayuu ka dhisey Xaafuun iyo Caluula. Midna cusbada ayaa laga dhoofin jiray midna Beeyada. Gobollada dhexe qudhooda hargaha iyo subagga ayuu ka dhoofsan jiray. Gobollada galbeedka ah, iyagu waxay ahaayeen dad xoolo raacato ah oo maamulkii Xabashida uusan weli soo gaadhin. Waxay haysteen dhul ka biyo iyo baad badan gobollada waqooyi. (Somali Nationalism, Saadia Touval, 1963, p. 102, Massachusetts – USA).
Waxaa intaas weheliya Ingiriiska oo aanan marna ku tala-gelin in uu gobolladan ka dhiso dhismo-hoosaadyo iyo ilo dhaqaale. Sababta uu degaankan u daneynayay waxay ahayd oo keliya arin ah istraateejiyad siyaasadeed. Sidaa darteed, wixii dagaalkii Daraawiishta ka danbeeyey, arinta keliya oo maamulkii Ingiriiska uu ku dadaaley waxay ahayd in uu soo celiyo xasilloonidii degaanka iyo in uu ururiyo cashuur loogu adeego maamulka (The State and Rural Transformation in Northern Somalia, Abdi Ismail Samantar, 1989, p. 45, Wisconsin – USA)
Qallinka:C/naasir Guray Meecaad. Lh.Hargeysa/Somaliland.